यी हुन अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका श्रीमान, नेपालबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनी बने अरबपति ! – Khabar Patrika Np
यी हुन अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका श्रीमान, नेपालबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनी बने अरबपति !
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०८, २०७८ समय: २१:०३:०१
बलिउड की चर्चित अभि’नेत्री ‘शिल्पा शेट्टी’का पति ‘राज कु’न्द्रा’ देश विदेशमा कहलिए’का व्यक्ति हुन् । तर कु’न्द्रा लाई भारत’मा धेरैले बिज’नेश म्यान भन्दा पनि शिल्वा शेट्टी’को पतिका रूपमा चिन्ने गर्दछ’न् । उनको विज’नेश विश्व’भर फैलिएको छ । राज कु’न्द्राले नेपाल’मा सल बे’चेर आफ्नो व्यव’साय सुरु भएका थिए ।
कुन्द्रा आज एक सफल बिजनेश’म्यान को रूपमा परिचित रहेका छन् । इन्टरनेटमा पा’एका जानकारी अनुसार हाल उनी सँग २४०० करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।एक अन्त’र्वार्तामा राज कुन्द्राले भने’का थिए,‘ आज म जुन सुख सयलको जिन्दगी बाँचिरहेको छु सानो छँदा ठीक उल्टो जिन्दगी बाँचि’रहेको थियो।’ आज उनी’सँग महँगा कारहरु रहेका छन् ।
जुन सानो छदाँ धे’रैको सपना हुने गथ्र्यो । १८ वर्षको उमेर’मा उनले आफ्नो बिज’नेश सुरु गरेका थिए । मिडल क्लास परिवारमा जन्मिएका उनीलाई माता पिताले निकै कठिन तरिकाले पाले’का थिए । उनलाई पैसा’को म’हत्व थाहा छ ।जब उनी १८ वर्षको थिए तब उनको पिताले रेष्टुरेन्टमा काम गर्न वा कुनै काम गर्न भनेका थिए।
आफ्नो जिन्दगीलाई कुन मो’डमा लाने गम्भिरताका साथ सोचिरहेका थिए । उनले सानो लगानी गरेर शल बेच्ने काम सुरु गरे । जसका लागि उनी दुबइ गए । हिरा व्यापारीसँग उनको भेट भयो । तर, कुरा बनेन । राज त्यहाँबाट नेपाल गए । के’ही पश्निा शल किने र ब्रिटे’नको ब्रान्डेड स्टोर मार्फत बेच्न थाले ।
जति छिटो उनको कारोबार बढीरहेको थि’यो उती नै छिटो प्रतिस्पर्धा पनि बढीरहेको थियो । यसपछाडि हिराको व्यापारका लागि उनी पुन दुवइ गए ।त्यसपश्चात उनलाई पछाडि फर्केर हेर्ने अवस्था कहिल्यै आएन । आज उनी १० कम्पनीका मा’लिक हुन सफल भएका छन् । सन् २००४ मा आएको ब्रिटिश म्यागजि’न धनी व्यक्तिह’रुको सुचीमा राज १९८ औ स्थानमा रहेका थिए ।